Semalt Ukwazi Indlela Yokwenza Izinjini Zokusesha Zithande Isayithi Lakho
Kuphephile ukusho ukuthi amagama angukhiye kufanele ayingxenye ye-website okuqukethwe, ngakho-ke njalo badinga ukunakekelwa okungavamile. Ngamanye amazwi, ungasho ukuthi ukusebenzisa amagama angukhiye afanele kubalulekile ekusindeni kwesayithi lakho. Ngaphandle kwalokho, luhlobo lwamakhono adinga isikhathi esiningi - cost of long term care insurance california. Isibonelo, uma uthengisa ama-orchid, kufanele ucabange ngamagama afanele futhi uwafake ezihlokweni zakho njalo. Kuyoba kuhle uma usebenzisa amagama angukhiye abalulekile kuzo zonke izigaba zesigaba sesibili, ngaphandle kokonakalisa ukubheka konke kwalesi sihloko. Ngamafuphi, kufanele uqinisekise ukuthi okuqukethwe kufundwe ngokwemvelo futhi kubhaliwe ngaphandle kwephutha lolimi noma amapelomagama.
U-Igor Gamanenko, uchwepheshe we-Semalt , uthi ungayithanda noma cha, kodwa amagama angukhiye ayiyingxenye ebalulekile yewebhusayithi. Zisetshenziselwa ukukhomba inani elikhulu labantu futhi zikusize uhlakulele ukuqonda ukuthi yiziphi izinhlobo zama-athikili noma amagama ababukeli bakho abawafunayo. Abanye ochwepheshe be-SEO basebenzisa izindlela ezingekho emthethweni nezingafaneleki njengegama eliyisihluthulelo lokugxila ukuze zibekwe amasayithi amaklayenti abo. Ukugxilwa kwegama elingukhiye kungachazwa njengama-athikili okulayisha ngokweqile noma amathegi we-web amakhasi anamazwi amaningi, imisho, namagama afanelekayo.
Ngokwesibonelo, uma ubhale amathegi we-meta noma incazelo ye-meta ngokungalungile futhi ufuna ukusebenzisa igama elingukhiye, ngokuphindaphindiwe, kungase kungakunikezi imiphumela oyifunayo. Qiniseka ukuthi isakhiwo sewebhu yakho kuhlale kulungile.Uye, kufanele ugxile kokuqukethwe kwekhwalithi. Sebenzisa amagama afanelekile kusihloko sesayithi lakho, isibonelo, ungasebenzisa amagama afanelekile njenge-orchid, ama-flowerpots, izimbali, izitshalo ezinamanzi nezinye. yenza kucace ukuthi akuyona igama elingukhiye noma ibinzana okufanele liphindwe kuyo yonke imisho yakho. Kumelwe kube nokuvumelana nokuqonda okuthile ezincekeni zakho zokuqukethwe.
Incazelo enhle ye-meta, ngakolunye uhlangothi, kuyinto okudingeka uyilalele. Qinisekisa ukuthi awusebenzisi igama elingaphezu kwelilodwa elilodwa lapha. Bheka izibonelo zezincazelo ze-meta zamanye amawebhusayithi. Zama okusemandleni akho ukuthi ufunde kuzo futhi ubhale izincazelo zakho ze-meta ngendlela ababukeka bengenasici futhi banegama elilodwa noma amabili kuphela.
Ngivumele lapha ngikutshele ukuthi ukugxila kwegama elingukhiye ngeke kusebenze ibhizinisi lakho njengoba abashayeli be-search bazohlola isayithi lakho kanye nokuqukethwe kwalo ngekhwalithi. Uma iwebhusayithi yakho iqukethe amagama angukhiye angokwemvelo kanye nokuphakama okukhulu kwegama elilodwa noma ibinzana, isimo sayo sizokwehliswa. Kwezinye izimo, i-Google, i-Bing, ne-Yahoo ingase ifake noma ivinjelwe isayithi lakho impilo yonke, futhi ayikwazi ukukhokha futhi.
Yingakho kufanele uqaphele ngenkathi usebenzisa amagama angamagama angukhiye futhi ungenzi amagama amaningi nemishwana efanele ngenxa yezinga eliphezulu. Imiphumela izobe ihluke, futhi awukwazi ukufeza imiphumela oyifunayo. Siphakamisa ukuthi ubhale okuqukethwe kwekhwalithi futhi ugxile ezihlokweni ezifundisayo ukuze izinjini zokusesha zithande isayithi lakho.